Zvirongwa zvevakuru - Utah Pride Center
Nekuda kwe COVID-19, isu takatamisa maitiro edu kuenda online. Hechino chinongedzo chekutungamira: Online Orientation. Once we receive your completed orientation form, we will follow-up with you.
Yedu vakuru tarisiro zvirongwa zviripo kune vanhu vane makore 18+ kumusoro kuti vagadzire yakashinga uye yakachengeteka nzvimbo yekushamwaridzana, kudzidzisa, kugovana zviwanikwa uye kutsigirana.
Tiri pano kune munhu mukuru munhu wese muUtah LGBTQ + nharaunda. Isu hatingavipo pasina rinoshamisa basa revanozvipira chirongwa chehutungamiriri zvikwata. Imwe yega yezvirongwa zvedu iripo nekuti mumwe munhu ari muUtah LGBTQ + akaona kukosha uye akashanda nesu kugadzira chirongwa chavo, kubatsira mukutsvaga nzvimbo dzemisangano, mari yemapurojekiti, kuisa zviwanikwa, uye kuendesa izwi kunharaunda.
Isu tinobata aya mapoka kune avo vasina nzvimbo dzakachengeteka munyika, saka zvakakosha kudzoka kumashure uye kuve vanoremekedza. Kana iwe uchifarira kuzvipira nechero ipi yevakuru zvirongwa, ndokumbira usvike kwatiri uchishandisa ruzivo rwekuonana pazasi:
Brittany Martinez (she/her/hers), Manager of Adult Programs [e]
Yevakuru Tarisa Zvirongwa Nhau
Zvirongwa zveVakuru Nhau